မိုးဦးဆိုတာ သေချာမှာ အိမ်ပြန်တယ်။
လောကဓံတွေပါလား အမေ လို့ ဆရာချောကရေးခဲ့
တကယ်တော့ တော်လှန်သော လောကဓံတွေ။
ငါ အခုထိ အိမ်မပြန်သေး။
၃၁ - ၁ - ၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 6:44 PM No comments:
အယာတိုလာခုံပနီ ကို တူးတူးခါးခါးမုန်းတယ်
အီရန်အစိုးရကို အရူးအစိုးရလို့ မကြာမကြာပြောလေ့ရှိတယ်
သူက ဘာသာမဲ့လို့ ကျနော့်ကိုမိတ်ဆက်တယ်
ကျနော်တို့အလုပ်က ကျောင်းသားတွေကို ညစာကြွေးတာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငတ်နေတဲ့လူတွေ အများကြီးတဲ့
သူ အီရန်လို ကဗျာတွေရွက်ဆိုနေတာတဲ့။
တယောက်နဲ့တယောက် မေးကြရင်း ပြောကြရင်း
ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ အစိုးရကို မကြိုက်လို့ တော်လှန်နေကြတာရှိတယ်
ငါဟာ တော်လှန်ရေးသမားပဲလို့ ကျနော်ကပြောတော့
၁၆ - ၆ - ၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 11:06 AM No comments:
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အသံတွေက ပိုမိုလို့ကျယ်လောင်။
လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့သတ္တ၀ါ လို့ ယုံကြည်ယူဆခဲ့သူပါ
ဒါက ဂိုဏ်းထောက်ချင်သူများသို့ ပြန်ကြားချက်။
ငါဟာ ပြဌာန်းခံမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဆီကိုပဲ ရောက်သွားတယ်။
ငါ့အလံကို ငါ လွှင့်တင်ခဲ့တယ်။
ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခံခဲ့ရမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။
နိမ့်ရာစိုက်တဲ့ ရင်ဝက လှံချက်နဲ့အတူ
၁၅ - ၇ - ၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 10:44 AM No comments:
Red Label ပုလင်းကို ငေးကြည့်နေမိတယ်
ကိုဆက် ကို သတိရမိနေလို့ပါ။
Red Label ပုလင်းကိုကြည့်ပြီး
ကိုဆက် ကို သတိရနေတယ်ဆိုတာက
အချက် ၂ ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ငွေဆိုလို မယ်မယ်ရရ မကပ်ခဲ့ကြသူတွေမို့
ပစ္စည်းမဲ့ဆိုသည့် စကားလုံးကို သုံးခြင်းဖြစ် - ဤကား စကားချပ်)
အစားကောင်းလေးစားမိတဲ့အခါ မိတ်ဆွေတွေကို သတိရတယ်ဆိုသလိုမျိုး
သောက်ညွှန်းလေးနဲ့ သတိရမိတာက တခု …..။
ဟေ့လူ နီစရာရှိ ရဲရဲနီ
ကျုပ်က နီ စရာရှိ
Red Label သောက်ပြီးနီတယ်ဗျာ ဆိုပြီး
သောက်တဲ့ အရက်ဖြစ်လို့ သတိရတာက တခု …။
နိုင်ငံရေး အနိမ့် - အမြင့်
အတက် - အကျ
သူ့အဖေကြောင့် သူ့ကို ဆက်ဆံခဲ့ကြတာ ဆိုပဲ။
သူက တွေးတွေးဆဆ ပြောလေ့ရှိတယ်
ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ပျောက်သွားလေ့ရှိတယ်။
လူငယ်ထုရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံရသူ
သူ့နိုင်ငံရေးကို သူဘာသာ အရက်နဲ့မြည်းပြသွားခဲ့သူ။
ဒုက္ခသည်စခန်း တောင်ခါးပန်းက တဲကလေးမှာ အတူနေခဲ့ကြတယ်
ကျနော်က ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် တော်လှန်ရေးငယ်ဖြူတပါးအဖြစ် တင်စားလေ့ရှိပြီး
သူကတော့ ကျနော့်ကို ကဗျာဆရာ - သိုင်းသမား လို့ ရည်ညွှန်းလေ့ရှိတယ်
တနေ့တော့ ကျနော်က ပြောတယ်
သိုင်းပညာ အဖျက်အစီးခံလိုက်ရတဲ့ သိုင်းသမားတွေလိုမျိုး … ဆိုတော့
သိုင်းပညာကို ဖျက်စီးတဲ့နေရာမှာ ၃ မျိုးရှိတယ်ဗျ
- အဆိပ်မိသွားလို့ သိုင်းပညာပျက်စီးသွားတာရယ်
- အတွင်းအား ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ပြီး သိုင်းပညာဖျက်စီးတာရယ်
- သိုင်းကွက်တွေကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး သိုင်းကွက်ဖော်လို့မရအောင် ဖျက်စီးလိုက်တာရယ်။
အတွင်းဒါဏ်ရာ ရရှိသွားပြီး သိုင်းပညာအဖျက်စီးခံရသူအတွက်
အတွင်းအား ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိလာခဲ့တယ်။
ဘယ်မျှ ဖွံ့ထွားလာပြီးလည်းဆိုတာကိုလည်း စမ်းကြည့်တဲ့ကဗျာဖြစ်တယ်။
၂၃ - ၆ - ၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 10:42 AM No comments:
ရ - ရက် ကို လှမ်းကြည့်ခြင်း
ရောနိသော မနသီကာရ တရားနဲ့အညီ
ပင်လယ်ဝကို လှေကလေးနဲ့ ထွက်ခဲ့
D Day အတွက် စုစည်းကြမယ်။
၂၂ - ၂ - ၂၀၁၄
(ပင်လယ်ဝကို လှေကလေးနဲ့ ထွက်ခဲ့ - ဆရာဒဂုန်တာရာ၏ ကဗျာစာသားဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ဖိုးညို at 10:39 AM No comments:
ပြီးတော့ … တိုက်တက်ရမယ်။
၀ိုင်း ပြီဆို မလွတ်စေနဲ့။
၇ -၂ -၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 10:36 AM No comments:
အဲဒါနဲ့ အရက် သွားဝယ်လိုက်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ကလေးသူပုန်လေးဟာ လူကြီးဖြစ်လာတယ်။
ပေါင်းလောင်းချပ်မြှုပ်ရာအရပ်မှာ အရက် သောက်ခဲ့တယ်။
ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကြ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို
ရင်ဘတ်မှာ ချိပ်လို့ အရက် သောက်တယ်
လူထုကိုမှိခိုကာ တော်လှန်စစ်နွဲရမှာ ဆိုတဲ့
တေးချင်းကိုသိလို့ အရက် သောက်တယ်
မောင်းပြန်ကို ဒေါင်းအလံနဲ့ တိုက်မယ် ဆိုတဲ့
စိတ်ဓာတ်နဲ့ အရက် သောက်တယ်
ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေ အတိုက်အစားခံပြီး အရက် သောက်တယ်
အဲဒီ ယုံကြည်စိတ်နဲ့ အရက် သောက်တယ်။
တယောက်ကို တယောက် အရက်တွေ ငှဲ့လို့
ဆီးပူးဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာ သောက်တယ်
ဖိုးထွန်းကျော်ရဲ့ တဲကလေးမှာ သောက်တယ်
၄၈ မှာ သောက်တယ်
ပါဏာတိပါတ ကံတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ကုတ် ညှစ်ထုတ်ခဲ့သူပါ
ဓါး ဓါး ချင်း
လှံ လှံ ချင်း စိတ်ဓာတ်ကို
လက်မောင်းမှာ ကပ်ပြီး ကြီးခဲ့ရသူပါ
ပြုစု ပျိုးထောင်လာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀
တော်လှန်ကျောင်းသား ဘ၀များ အလီလီ
ငါတက်ခဲ့တဲ့ တောင်တွေကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့
မာန ကြီးကြီးမြင့်သွားတယ် ဆိုသလိုမျိုး …..။
ကရင်နီ အရက် သောက်တယ်
ကောက်ညှင်း အရက် သောက်တယ်
ဆန် အရက် သောက်တယ်
ဇ၀က်သာ အရက် သောက်တယ်
လောက်ခေါင်ကို အချိုရည်ရောပြီး သောက်တယ်
မိုက်ခေါင် အရက် သောက်တယ်
ပုလွေဆရာ တရာ အရက် သောက်တယ်
ရေဂျင်စီ အရက် သောက်တယ်
၂၈ - ၂ - ၂၀၁၄
Posted by ဖိုးညို at 10:34 AM No comments:
မုဆိုးမဆိုပြီး … … …။
အဲဒီ လောကဓံ ဟိုလူ ဒီလူတွေရဲ့ကြားမှာ မုဆိုးမကြီးဟာ
ရဲရဲ ရင့်ရင့် ရပ်တည်ခဲ့တယ်
ထားပါတော့ သူတို့စကားနဲ့ ပြောရရင် ထမိန်လုပွဲပေါ့
သူတို့ခိုင်းတာ မလုပ် သူတို့စကားကို နားမထောင်တဲ့အခါ
အဲဒီလောကဓံတွေဟာ တဖက်နဲ့ တဖက်
ဒီလူက ထမိန်ရသွားတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်
ဘယ်သူ့ကိုမှ သူ့ ထမိန်ကို ပေးလိုက်တာမရှိပါဘူး
သူ့မိသားစုကို ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်တင်ချင်တယ်
မိသားစု ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်ဖို့ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာ အရေးကြီးသတဲ့။
မုဆိုးမကြီး ပြောတာက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ
ခင်မွန်းသည် ဆုံးပါးလို့ မုဆိုးမဖြစ်နေတာအပြင်
၂၈ - ၁၂ - ၂၀၁၁
Posted by ဖိုးညို at 8:13 PM No comments:
ကမ်းမမြင် - လမ်းမမြင်လို့
အခု သမုဒ္ဒရာ နှုတ်ခမ်းသားချင်း
ကျနော့်ကို ရိသဲ့သဲ့ ပြောကြ
“ငြိမ်းချမ်းရေး ဆရာကြီး” တဲ့
ကျနော်ကလည်း ခပ်တည်တည်ပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်
၁၆ - ၁၂ - ၂၀၁၁
Posted by ဖိုးညို at 8:10 PM No comments:
ချစ်ခြင်းက ပိုမိုလို့ အဓိကကျ
ကျနော်မှန်တိုင်း ဇွတ် မမောင်းခဲ့ပါဘူး
ဒီလို လမ်းခွဲ … အဲဒီလိုပြောမယ့်အစား
“ကွဲလွဲရင်း ပေါင်းစည်း - ပေါင်းစည်းရင်းကွဲလွဲ” ဆိုတာလိုမျိုး။
ပဒတ်စာခြောက်တွေကို ဟင်းချို ချက်သောက်တော့
ခြေလှမ်း ၃ လှမ်းအယူအဆ
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်တယ် … မငြင်းနဲ့။
၂၅ - ၁ - ၁၃
Posted by ဖိုးညို at 8:06 PM No comments:
အေးမြတဲ့ ရာသီဥတုရဲ့ အရသာကို ခံစားရင်း
“သခင်မျိုးဟေ့ … တို့ဗမာ” ဆိုတဲ့
စန္ဒယား တီးချင်သလိုလို …
ပြီးတော့ … သူ၊ ဒဂုန်တာရာ
ညီညွတ်ရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ …
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ လွတ်လပ်ရေးလို့ …
လွတ်လပ်ရေးဟာ ဒီမိုကရေစီရေးလို့ …
ဒီမိုကရေစီရေးဟာ လူမျိုးစုံချစ်ကြည်ရေးလို့ …
အဲဒီလိုနဲ့ သူ့ အဘိဓမ္မာဟာ
“ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ” ဖြစ်ခဲ့တယ်
“ကာရံမဲချင်မဲ့ အဘီဓမ္မာ မမဲ့စေနဲ့”လို့။
“ပင်လယ်ဝသို့ လှေကလေးနဲ့ ထွက်ခဲ့” ကြပြီ။
၁၁ - ၁၁ - ၁၁
Posted by ဖိုးညို at 8:02 PM No comments:
ကျနော် ငယ်စဉ်ဘ၀ ဆယ်ကျော်သက်လောက်ကတည်းက ကဗျာရေးသည်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ၁၀ တန်း ကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေစုပြီး ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ နောက် တော်လှန်ရေးဒေသသို့ ရောက်လာသည်။ ရောက်သည့်နေရာက ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ရှိသည့်နေရာ။ ကိုတိုက်မောင်းတို့နှင့် ဆုံတွေ့ရသည်။ လက်ရေး ကဗျာစာအုပ်တွေကို ရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာပင် ရေးသား ထုတ်ဝေဖြစ်ကြသည်။ “ရဲရင့်ဂလက်စီရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိ” …. စသည်။ တော်လှန်ရေး နယ်မြေတွင် ကျနော်ရေးသားခဲ့သည့် ပထမဆုံးကဗျာက “နေညိုညို ဧရာမငိုနဲ့” ဆိုသည့်ကဗျာ။ ထိုကဗျာကို ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်သို့ပို့ခဲ့သည်။ သို့သော် ပါလာသည့် ထိုကဗျာကား ….. ထားတော့။
နောက်တော့ ပြည်မြိုသား အရှည်ကြီး တောခိုလာသည်။ သူနှင့်အတူ ပြည်မြို့သား ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်၏ ကဗျာတွေကို လက်ရေးနှင့် ကူးယူထားသည့် မှတ်စု စာအုပ်ပါလာသည်။ ထိုစာအုပ်သည် တော်လှန်ရေးနယ်မြေထဲရောက်သည့်အချိန်က ပထမဆုံးဖတ်ရသည့် ကဗျာစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် နေစဉ်က ဆရာချောနွယ်ကဗျာတွေကို ဖတ်ရသော်လည်း ဤမျှလောက် တထိုင်တည်း များများ စားစားကို မဖတ်ဖူးခဲ့။ ဆရာချောက ကျနော်တို့ကို ဖမ်းစားသွားခဲ့ပြီ။ ကိုတိုက်မောင်းကတော့ ဆရာချော ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီး “ကျနော်တို့တော့ ကျန်ခဲ့ပြီဗျိုးးး” လို့ဆိုလာသည်။ ဆရာချောရဲ့ ကဗျာတွေ ကျနော်တို့အပေါ် ဒုတ်ဒုတ်ထိ စိုက်ဝင်ခဲ့သည်ကတော့ သေချာသည်။
ထိုစဉ်က ကျနော်တို့နေသည့်နေရာက “လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (လပဒတ)” တည်ရာနေရာ။ ထိုနေရာတွင် နေကြသူများကလည်း စာဖတ်ကြသူတွေ၊ စာဖတ်နာသူတွေ၊ စာစုံဖတ်သူတွေ။ ဂျူးရဲ့ “မရှိမဖြစ်မိုး” လည်း ဖတ်နိုင်သည်။ “ရုပ်ကမ္ဘာ” လည်း ဖတ်နိုင်သည်။ နောက်တော့ ထိုတပ်ပေါင်းစုက “သေနတ်သံ ဂျာနယ်” ဟူ၍ ထုတ်လာသည်။ ထိုဂျာနယ်တွင် စာတွေဝင်ရေးကြသည်။ မှတ်မိနေသည်က ထိုဂျာနယ်ကို ကိုင်တွယ်သူ အယ်ဒီတာက ရဲဘော်အေးသန်း။ ဆောင်းပါးတစောင်ရေးသည်။ “ကျနော်သိသော ကွန်မြူနစ်ဝါဒ”။ ထိုဆောင်းပါးသည် အခြားကျနော်နှင့် အတူရေးသူများကြားမှ တပုဒ်လုံး ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည့် ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူလိုက်မိသည်ကို ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလိုပါသည်။ နောက် တအုပ်တွင်တော့ ကဗျာရေးဖြစ်သည်။ “ကမ္ဘာပုတ်ခြင်း”။ ထိုခေါင်းစည်းကို ကျနော်ပေးခဲ့သည်တော့မဟုတ်။ ကျနော့်တောင်းဆိုချက်ဖြင့် အရှည်ကြီးပေးခဲ့သည့် ခေါင်းစည်းဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာ ဂျာနယ်သို့ သွားပေးသည့် အခါ အယ်ဒီတာ ရဲဘော်အေးသန်းက “ခင်ဗျားပေးတဲ့ကဗျာကို ကျနော်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဗျာကောင်းလို့တော့ ထင်တယ်” ဆိုပြီး ပြုံး၍ ပြောသည်။ နောက်စာအုပ်ထွက်တော့လည်း ပါလာပါသည်။ ထိုကိစ္စကို အခု ပြန်စဉ်းစားမိတော့ နည်းနည်းတော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်မိသည်။ “သေနတ်သံ ဂျာနယ်” ကို အယ်ဒီတာလုပ်နေသည့် ရဲဘော်အေးသန်းသည် ကဗျာဆရာအောင်ငြိမ်း ဖြစ်နေသည်ကို နောင် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာမှ သူ၏ လုံးချင်း ကဗျာစာအုပ်ထွက်လာတော့မှ သိရတော့သည်။ ကျနော်က ထိုသို့ဖြင့် နုံပါသည်။ မည်သို့ပင် နုံခဲ့သည်ဖြစ်စေ ရဲဘော်အေးသန်းသည် ကျနော်၏ ပထမဆုံး အယ်ဒီတာ ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုတော့ ယနေ့တိုင် စိတ်ထဲစွဲနေမိသည်။
နောက်တော့ ကျနော်တို့ တပ်ဂွင်ပြောင်းရသည်။ ဒေါင်းဂွင်။ ထိုတွင်လည်း ကဗျာစာအုပ်တွေ ထုတ်ကြပြန်သည်။ “လက်ကျန်ရှင်းတန်း” … စသည်။ ပေါက်သည့် စာအုပ်ဟု ပြောရမည်ထင်သည်။ လူကြိုက်များခဲ့ပါသည်။ ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ဆိုသည့် ကလောင်အမည်ကို ထိုစာအုပ်တွင် စတင်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါင်းဂွင်ရောက်မှ ကဗျာဆရာ ကိုငြိမ်းဝေနှင့် ဆုံဖြစ်ကြသည်။ ကိုငြိမ်းဝေနှင့် ဆုံသည့်အချိန်ထိ ကျနော်က ဆယ်ကျော်သက်။ ကိုတိုက်မောင်းနှင့် သူ အတော်လေးကို အပေးအယူ တည့်ကြသည်။ “နှင်းဆီဝိုင်” ဆိုသည့် ကဗျာဝိုင်းကိုပင် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ၂ ယောက် စကားပြောပွဲကို ကိုတိုက်မောင်းခေါ်သွား၍ လိုက်ပါခဲ့ရဖူးသည်။ ထိုအချိန်က ကျနော် ခရမ်းပြာအပျိုမကို ဇာတ်ကောင်တည်ထားသည့် “ခွဲခွာခြင်းရဲ့ ဒီကြွသံ” ကဗျာကို ရေးသား ပြီးစီးချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ဆရာချောကဗျာတွေကို အစုလိုက်ဖတ်နေရပြီဖြစ်သော်လည်း ကျနော့်အပေါ်တကယ်တမ်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေသူက ဆရာအောင်ဝေး။ ခရမ်းပြာအပျိုမသည် ဆရာအောင်ဝေး၏ “ယာမဟာဂူဂျီ ခင်ဆွေရီ”ကို အားကျ၍ ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးဒေသမှာ ဥိးဆုံးရေးဖြစ်ခဲ့သည့် ကဗျာဖြစ်သည့် “နေညိုညို ဧရာမငိုနဲ့” တွင်လည်း ဆရာအောင်ဝေး အသံတွေ၊ အသုံးတွေက လွှမ်းမိုးနေသည်။ “တော်လှန်ခြင်းမြင်းရိုင်းက ကဆုန်ဆိုင်းပြေးလွှား၊ ငါ့အိပ်ကပ်ထဲက အကြောက်တရားအကြွေစေ့တွေ လွင့်စင်ကျသွားပေါ့” ထိုသို့ ဆရာအောင်ဝေးက ကျနော့်ကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာအောင်ဝေး ထံမှ ကျနော် တော်တော်နှင့် မထွက်နိုင်ခဲ့။ ကျနော့် ငယ်ဘ၀ကို လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ကဗျာဆရာကိုး။ အဓိက သူ့ကဗျာတွေထဲမှာ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးက “ဝေဖန်ရေးဆရာနှင့် စီးချင်းထိုးခြင်း”။ ဆရာအောင်ဝေး မဲဆောက်သို့ရောက်ချိန်က ကျနော်မရှိ။ စက်တင်ဘာမျိုးဆက်များကို စစ်သင်တန်းသွားပေးနေရသည်။ တွေ့ဆုံဖြစ်လျင် ထိုအကြောင်းများ ပြော၍ ဂါရ၀ ပြုချင်ခဲ့သည်။ နောက်ပြီး “ဒီမိုကရက်တစ် သရုပ်မှန်ဝါဒ” အကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းတော့ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်ခဲ့သည်။ ထို “ခွဲခွာခြင်းရဲ့ ဒီကြွသံ” ကဗျာကို ကိုတိုက်မောင်း အင်မတန် အားရကြေနပ်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ “ခင်ဗျားက ဒီကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာ ဖြစ်သွားတာဗျ” လိုပြောဖူးသည်။ ထိုကဗျာကိုပင် ကိုငြိမ်းဝေအား ကိုတိုက်မောင်းမှ ပေးဖတ်ခဲ့သည်။ သူလည်းပဲ ထိုကဗျာကို သဘောကျဟန်တူသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကျနော်က သူတို့ ၂ ဦးကြားတွင် ကဗျာဆရာ ဖြစ်၍ သွားပါတော့သည်။ ၁၉၉၄။
“ခွဲခွာခြင်းရဲ့ ဒီကြွသံ” သည် လက်လက်ဆက်ဆက် ခွဲခွာခဲ့ပြီးကာစ ကျနော့်မြို့ကလေးနှင့် အခြေချကာစ သူပုန် ဘ၀ကိုယက်ရှယ်ထားသော ကဗျာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အသုံးဖြစ်သည့် “ဒီ” ကို ခေါင်းစည်း တင်ခဲ့မိလေသလားတော့မသိပါ။ ရေလှိုင်းကြက်ခွပ်တွေကို လွမ်းသည့်အလွမ်းပါသည်။ တော်လှန်ရေးယုံကြည်ချက်တွေ ပါသည်။ ထိုကဗျာသည် အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်သည့်စစ်ခရီးစဉ်အတွင်း ရန်သူဝိုင်းပတ်ပိတ်စို့မှုကို ထိုးဖောက်ထွက်ရသည့်အချိန်က “ပုန်းတဲ” တွင် မှတ်စုစာအုပ်ထားခဲ့ရင်း ဒေသခံများ တောင်ယာမီးရှို့ချိန်၌ မီးခုန်ကူးရင်း ပါသွားခဲ့သည်။ ထိုကဗျာနှင့် အတူ ကျနော် အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်မှု စစ်ဆင်ရေးကာလတလျောက်ရေးခဲ့သော ကဗျာအားလုံး ပါသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုတိုက်မောင်းကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းလည်း ကျနော်တို့ ကဗျာစာအုပ်တွေ ဆက်ထုတ်ဖြစ်သည်။ ကျနော် အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေးခရီးမထွက်ခင်အထိ ၃ အုပ် ထုတ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာများထဲတွင် “မြို့ပြကို နောက်ဖေးပေါက်က ၀င်ခဲ့ခြင်း” ကဗျာကို လက်တွေ့ခဲ့သည်။
အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်သည့် ကာလများတွင်တော့ ကဗျာများရေးနေသည်မှ အပ ကဗျာစာအုပ်များတော့ မထုတ်ဖြစ်တော့။ ထိုအချိန်က ကျနော်ရေးဖြစ်သော ကဗျာများသည် ဆရာအောင်ဝေးနှင့် ဆရာချောနွယ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကဗျာများသာဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိပ်စာကြည့်တိုက်လုပ်ပြီး စာအုပ်များတော့ ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်သည်။ လကျော် နောက်ကျပြီး မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်များ ၀ယ်ဖတ်သည်။ ထိုအချိန်များက ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းတွင် မော်ဒန်နှင့် ပို့စ်မော်ဒန်များအကြောင်း အားကောင်းမောင်းသန် ဆွေးနွေးနေကြချိန်ဖြစ်သည်။ ဆရာဇော်ဇော်အောင်၊ ဆရာခင်မောင်ရင်၊ ဆရာမောင်ကြည်သစ် … စသည့် ထိုအချိန်က အားကောင်းမောင်းသန် ဆွေးနွေးနေကြသည့် ဆရာများ၏ စာအုပ်များကိုလည်း ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က ထိုဘာသာရပ်ကို အဓိကထားတင်ပေးနေသည့် “သရဖူမဂ္ဂဇင်း၊ စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်း” တွေလည်း ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ပုံစံများကိုလည်း စမ်းသပ်ရေးခဲ့သည်များလည်း ရှိပါသည်။ ဆိုပါစို့ “ပင်လယ်ရေကို သောက်မိခြင်း” ကဗျာ။ ထိုကဗျာတွင် လေးထောင့်ဘောင် အနီကို ခတ်ထားသည်။ ထိုဘောင်ထဲတွင်တော့ စန္ဒာ၊ စန္ဒာ ဆိုသည့် စကားလုံးကို အပြည့်ထည့်ရေးလိုက်တော့သည်။ အောက်က ကလောင်အမည် ညိုထက် (လမ်းသစ်ဥိး) ဟု ထိုးလိုက်သည်။ ကျနော် ပို့စ်မော်ဒန် ကဗျာဆရာဖြစ်သွားပြီဟုလည်း ဘ၀င်မြင့်သွားခဲ့ဖူး သေးသည်။ ကိုဖေသက်နီကတော့ ထိုကဗျာကိုတွေ့သောအခါ ပြုံစိစိဖြင့် တုန့်ပြန်ဖူးသည်။
နောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဒေသထဲသို့ ရောက်သွားပြန်သည်။ ထိုတွင်လည်း ကဗျာများ ဆက်ေ၇း ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် ကဗျာဆရာ ကိုဌေးအောင်နှင့် ဆုံတွေ့ရသည်။ သူရေးထားသည့် “ကမ္ဘာလောကရဲ့ သမီးပျို” ကဗျာကို သူကိုယ်တိုင် ရွက်ပြသည်ကို ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ ကဗျာရွတ်ဆိုမှု အတော်လေးကို ကောင်းသည့်သူဖြစ်သည်။ သမီးလေးရေ …. ဆိုသည့် အသံကို သူရွက်သွားသည်မှာ သူသာလျင် ရွက်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ကျနော်တိတ်တိတ်လေး သူရွတ်ဆိုသလို လိုက်ရွတ်ကြည့်ဖြစ်သည်။ မအောင်မြင်။ ထိုဒေသတွင် ရေးခဲ့သည့်ကဗျာများထဲမှ “သိကျိပ်” ကဗျာကို ကျနော် ၀ိရောဓိလွင်ပြင်ကို ရောက်ရောက်ခြင်း ထုတ်ဝေသည့် ကဗျာစာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ကဗျာဆရာ ကိုလွမ်းဏီကတော့ ထိုစာအုပ်ထဲတွင် ထိုကဗျာတပုဒ်ပဲ ကဗျာပါသည်ဟု ဦးဂင်ကြီးကို ပြောခဲ့သည်ဟု ပြန်ကြားရသည်။
ကျနော် ၀ိရောဓိလွင်ပြင်ကို ရောက်သည်က ၂၀၀၀။ ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ကျနော် ကဗျာတပုဒ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ “မချစ်မနှစ်သက်သူတို့နှင့် ကွေကွင်းပြီးနောက်” ကျနော့်ဘ၀တွင် အချိန်အကြာဆုံး ရေးဖြစ်ခဲ့သည့် ကဗျာဖြစ်သည်။ အမှတ် (၄) တပ်ရင်းတွင် စတင်ရေးသားခဲ့သည်မှ ကျနော့်မိသားစု နေထိုင်ရာ “ဟွေးနုကလယ်” ထိုင်းရွာကလေးသို့ ရောက်သည့်အထိ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာကို ထုတ်ဝေဖြစ်သည်ကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် တွင်မှ ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာတွင် ဆရာချောနွယ်ဟန်များ လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ကွယ်လွန်သူ ကိုမြင့်ဇေကပင် ခင်ဗျား ကဗျာက မောင်ချောနွယ် အရမ်းဆန်လွန်းနေတယ် ဟု ဝေဖန်ခဲ့ဖူးသည်။ ထို့အပြင် ထိုကဗျာထဲတွင် တောင်ယာရနံ့များလည်း ပါဝင်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ကျနော်ဝိရောဓိလွင်ပြင်ကို ရောက်သည့်အချိန်တွင် ကျနော့်တွင် ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ အယူအဆတခု ပါလာသည်။ ကျနော့်အပေါ် ပြည်တွင်း ကဗျာဆရာများ ဆွေးနွေးနေသည့် ကာလပေါ်ကဗျာများသည်လည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကဗျာဆရာ မောင်ချောနွယ်ကလည်း ကျနော့်ကို သိမ်းပိုက်မိနေပြီ။ သို့သော် ကာလပေါ်ကဗျာဆရာများကို ဖမ်းစားခဲ့သည့် (သို့) ကာလပေါ် ကဗျာများကို ဖြစ်ပေါ်စေအောင် လှုံဆော်မှုပေးခဲ့သည့် မြို့ပြလူအဖွဲ့အစည်း၏ အရောင်၊ အရိပ်၊ ရနံ့များကို ကျနော် မခံစားခဲ့ဖူး။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျနော့်တွင် မြို့ပြနေထိုင်မှု အတွေ့အကြုံ လောက်လောက်လားလားမရှိဆိုသည်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ပင် မြို့ပြ အာရုံခံစားမှုကို သူတို့လို ကျနော်ရရှိမည်မဟုတ်။ ကဗျာဖွဲ့စည်းမှုထဲတွင် ပါဝင်လာမည့် သင်္ကေတ၊ နိမိတ်ပုံ တို့သည်လည်း မြို့ပြဘ၀ အရောင်၊ အရုပ်၊ အနံ့များ မဖြစ်နိုင်။ ကျနော် တကယ်တန်း ဖြတ်သန်း ခဲ့ရသည်က နည်းပညာအရ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ၊ ပထ၀ီသဘောအရ တော်ပေါ်ကျေးလက်၊ နိုင်ငံရေးအရ စစ်မြေပြင်ကျေးလက်။ ကျနော့်ကို လွှမ်းမိုးနေသည်က ထိုအရောင်၊ အရုပ်၊ ရနံ့များသာဖြစ်သည်။ ကဗျာဖွဲ့စည်းမှုထဲမှ သင်္ကေတ၊ နိမိတ်ပုံ တို့သည် ပြည်တွင်းဆရာများလို မြို့ပြ အာရုံရုပ်များထက် ကျနော့်ရဲ့ တကယ့် ဘ၀ဖြစ်သည့် ကျေးလက်အာရုံရုပ်ကို ကာလပေါ်ကဗျာအမြင်ဖြင့် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရပေမည်။ ဤသည်ကား ကျနော့်ရဲ့ သရုပ်မှန်ဘ၀လည်းဖြစ်သည်။ ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် (ထို့ထက်ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုရလျင်) ကျနော့် သူပုန်ဘ၀တလျောက်လုံး ကြွေးမွေးလာခဲ့ရသည့် တောင်ပေါ်လူထုနှင့် တောင်ပေါ် ကျေးလက်ကို ကဗျာရေးသူတဦးအနေဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ရာလည်း ကျမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တခုက ကဗျာရဲ့ စေတနာအပိုင်း။ ကျနော့်အပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့သည့် ကဗျာအယူအဆများတွင် “ညစ်ပတ်သည့် ကဗျာ” အယူအဆသည် အလွှမ်းမိုးဆုံးဖြစ်သည်။ သူ့ဆိုလိုချက်က ကဗျာများတွင် တော၊ တောင်၊ သဘာဝတွေရဲ့ သာယာညှင်းသွဲ့သည် အလှအပများ၊ ရှင်းသန့်မှုများ၊ နန်းဆောင်ထဲက လူတွေရဲ့ ဘ၀တွေရဲ့ အလှအပတွေနဲ့ ရှင်းသန့်နေသည့် ကဗျာများထက်၊ အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ သာမာန်လက်လုပ်လက်စားများ၏ ချွေးတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက မသာယာမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံထဲက ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ စကားလုံး ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့ ကဗျာတွေရေးကြမယ် ဆိုသည့် အယူအဆပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ “ကာရံမဲ့ချင်မဲ့၊ အဘိဓမ္မာ မမဲ့နဲ့” ဆိုသည့် အယူအဆကိုလည်း လက်ကိုင်ပြုသည်။ ကျနော့်ရဲ့ ဘ၀လည်းဖြစ်သည့် တော်လှန်ရေးနဲ့ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေဟာ ကျနော့်ကဗျာရဲ့ အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာတော့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်း ကျနော်ရေးသည့် ကဗျာများသည် ဆရာမောင်ချောနွယ်ရဲ့ဟန်တွေ၊ ပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ တောင်ယာနဲ့ တောင်ပေါ်ကျေးလက်သင်္ကေတတွေ၊ တော်လှန်ရေးနဲ့ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် ကဗျာများကို ရေးဖြစ်လာတော့သည်။ ဤသည်ပင် ကျနော့်ရဲ့ ကဗျာဟန်ဖြစ်လာတော့သည်။
ပြန်စဉ်းစားမိသည့်များကို ချုပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျနော်သည် ပြည်တွင်းထဲက ကဗျာဆရာ ဖြစ်လာသူတော့မဟုတ်။ သူပုန်လုပ်ရင်း ကဗျာရေးလာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကလောင်တလုံးပိုင်ဆိုင် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော့်ကိုယ့်ကျနော် “သူပုန်ကဗျာဆရာ” စစ်စစ်ဟု တွေးမိလာသည်။ အမှန်က “သူပုန်ကဗျာဆရာ” ဟူသည်က မိမိကိုယ်ကို ဇန်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရင်းအတိုင်းပြောရလျင် ကျနော်သည် “တောင်ယာဇနပုတ်ထဲက ကဗျာဆရာ”
Posted by ဖိုးညို at 3:23 PM No comments:
ငယ်စဉ်က နှာခေါင်းမှာ အသက်ရှိတယ်
အခု ကြိးလာတော့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ပိုမိုပြည့်စုံလာတယ်။
ဗမာကဗျာဆရာ သစ္စာနီရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်လိုက်ရလို့ဆိုပြီး
ဒီမောင်းသံကြား ပန်းပွင့်စေသတည်း” ဆိုတော့ ...
မင်းကိုငါချစ်တယ် ဆိုတာချည်း ရွက်ဆိုပြခဲ့ရာက
မိုးဝေခေတ်ရှိ မရှိ အငြင်းပွားရာကနေ
ရေရောခံလိုက်ရတဲ့ နွားနို့တွေကို စူပါမင်းသောက်ခဲ့ရတယ်။
ကိုရဲဆိုတဲ့လူရဲ့ သစ္စာတွေက နီခဲ့လို့လား
စူပါမင်းဆိုတာကလည်း ခြေချော်လက်ချော် စူပါမင်းခဲ့ရတာပါ။
ဒိမှာ ကိုငြိမ်းအေး ခင်းဗျားရဲ့အိမ်က သရဖူ။
လွမ်းတေးဆိုလို့ အာဃာတကို ကိုယ်တိုင်ချေပြတယ်။
ရဲနီသစ္စာက စူပါမင်းကို စူပါမင်းဖို့ ပို့စ်မော်ဒန်နည်းနဲ့ …။
ဟဲဗီးဝိတ်တန်းက သူ့သရဖူကို သူပြန်ယူရဦးမယ်တဲ့။
အတွင်းအား ကောင်းတယ်လို့ မြင်ခဲ့ကြတာပါလို့ ယူဆပါသတဲ့။
အမှီးနင်းတက်ရမယ် - အမှီးဖြတ်တက်ရမယ်တဲ့။
“မင်းသား” ဆိုတဲ့ သိုင်းကျမ်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းသိုင်းကျမ်းတဲ့။
“စာဏကျနီတိ” ဆိုတဲ့ သိုင်းကျမ်းကလည်း မဆိုးပါဘူးတဲ့။
သူ့ဆီက လက် ၂ ချောင်းသိုင်းကွက်ကို သင်ယူဖို့ တပည့်ခံဖူးသတဲ့။
စူပါမင်းနဲ့ ဂျက်ကီချမ်း သိုင်းပညာဖလှယ်တော့
ဂျက်ကီချမ်းက စူပါမင်းကို UN မှာ သံတမာန်လုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမှာ
စူပါမင်းဟာ စူပါမင်းပါလို့ မသိခင်အထိ စူပါမင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်
စူပါမင်းဟာ စူပါမင်းပါလို့ သိတဲ့အခါ စူပါမင်းနိုင်မှာပါ။
(ဆရာ သစ္စာနီ၏ “စူပါမင်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ”ကို ဖတ်ပြီး ရေးသည်။)
၂၁ - ၇ - ၂၀၁၂
Posted by ဖိုးညို at 2:04 PM No comments:
ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း ပြည်ရန်အေးတွင် ရှိသည်
ဒီကနေ့ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့။ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရဲဘော်နွမ်ဂျာမှ ပြောပြသည်။ ကျနော်ကမသိ။ ကျနော်က အမေရိကားတွင်နေသော်လည်း အင်တာနတ် မရှိ။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကွယ်လွန်သည်ကို မသိလိုက်။
ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ကျနော့်ကြားတွင် အမှတ်ရစရာများရှိသည်။ သူနှင့် ကျနော် ဆုံကြသည်က ၁၉၉၈။ သတိထားမိသည် က ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းသည် ကယမ်းခေါင်းဆောင်များထဲတွင် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည့် ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည်ဆိုသည် ပင်။ လေ့လာသင်ကြားလိုစိတ်လည်း ရှိသူဖြစ်သည်။ ကျနော့် ပုဂ္ဂိုလ်အရပြောရလျင် ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီတွင် ဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ရွှေအေးပြီးလျင် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကို လေးလေးစားစားရှိမိသည်။
ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ကျနော်တို့ကြားဆက်ဆံရေးပုံစံက မတူကြ။ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ကိုထူးအောင်ဆက်ဆံရေးတွင် ကိုထူးအောင်က ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းအပေါ် အမြင်မကြည်စရာရှိနေမည်။ ထားတော့။ ပြန်ပြောလျင် ကာယကံရှင်များအတွက် မကောင်း။ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ကိုမြင့်ဇေတို့ဆက်ဆံရေးတွင် ကိုမြင့်ဇေက ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ရမည့် အခင်းအကျင်းရှိသည်။ ထားတော့ ဤတွင်လည်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနေသည့် ဖြစ်ရပ်များက ပြန်မပြောချင်စရာတွေ။ အခုတော့ ကိုမြင့်ဇေရော၊ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းပါ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီ။ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ရဲဘော်နွမ်ဂျာတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက တမျိုး။ ဒါကိုတော့ ရဲဘော်နွမ်ဂျာမှ ပြန်ရေးပြထားသည်။ ကျနော်နှင့် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း ဆံဆံရေးကတော့ … …
သတိထားမိသလောက် ကျနော့်ကို စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေကြသည်ကို သတိထားမိသည်။ ဤသို့ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာတော့ကြာပြီ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေကြသည်ကိုလည်း သိပ်တော့ဖြင့်နားမလည်။ ကျနော်ကတော့ ပုံမှန်အနေအထားရောက်အောင် အားထုတ်နေရသည်။ စမ်းသပ်မှုများထဲတွင် အပြင်းထန်ဆုံး စမ်းသပ်မှုဟု ယူဆချင်စရာ ဖြစ်ရပ်တခု ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းနှင့် ကျနော့်ကြားတွင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ပြောရမည်ဆိုလျင် ကျနော့်သတ္တိကို ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းက သိက္ခာတင်ပေးခဲ့ဖူးသည်ဆိုသည်ပင်။
ကျနော် ၁၉၉၈ တွင် “ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီ”၏ ဒေသများထဲတွင် နေခဲ့ရဖူးသည်။ ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေအေးနေထိုင်ရာ သိကျိပ်နှင့် “ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီ” ဗဟိုတည်ရာ “ပြည်ရန်အေး” စခန်းများတွင် နေခဲ့ရသည်။ “ပြည်ရန်အေး” တွင် နေစဉ်က ကျနော် ဗဟိုထောက်ပံ့ရေးတာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ ထိုစခန်းတွင် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း၏ အတွင်းရေးမှူးရုံးလည်းရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်က ထိုနေရာတွင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်အလုပ်များထဲတွင် ဗဟိုကို မီးပေးရသည့် မီးစက်ကို တာဝန်ယူရသည့် အလုပ်လည်းပါသည်။ မီးစက်ကို ညနေစောင်း ၆ နာရီလောက် မောင်းပေးရသည်။ ပုံမှန်ကတော့ ၉ နာရီဆို ပိတ်သည်။ ဗဟိုလူကြီးများ ရှိနေ၍ အလုပ်များနေပါက ၁၂ နာရီလောက်အထိမောင်းပေးရသည်။ တရက် … …။ ပြည်ရန်အေးစခန်းတွင် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းရှိနေသည်။ ကျနော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်း မီးစက်နှိုးပေးထားသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ မီးစက်က ဘာဖြစ်သည်မသိ ရပ်သွားသည်။ မကြာ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းရုံးမှ အကူရဲဘော်လေးတဦးက ကျနော့်ကို လာခေါ်တော့သည်။ ကျနော်လည်း လိုက်သွားသည်။ အတွင်းရေးမှူးရုံးတွင် လူအတော်စုံနေသည်။ နိုင်ငံရေးမှူး ကိုဌေးအောင်လည်း ရှိနေသည်။ ကျနော်လည်း ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ ဘာရယ်တော့မသိ။ မျက်နှာတွေကတော့ မသာမယာ။
ကျနော်ထိုင်လိုက်သည်နှင့် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းက ဆီးပြီးဆူတော့သည်။ သူအလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ မီးစက်ဘာ့ကြောင့် ပျက်သွားရသလဲဆိုသည့်ကိစ္စ။ သူ့ကိုမလေးစားလို့ ဒီလိုဖြစ်တာလားဆိုပြီးတော့လည်း မေးသည်။ ကျနော်က မနေနိုင်။ သူ့ကိုမလေးစားလို့ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းမဟုတ်။ မီးစက်မှာ တခုခုဖြစ်နေလို့ ပြင်ဖို့ လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း ကျနော်က ရှင်းပြသည်။ ထိုသို့ပြောတော့မှ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းက ဘေးနားတွင်ရှိနေသည့် အေကေ ၄၇ ကို ယူပြီး မောင်းတင်ကာ ကျနော့်ကိုချိန်တော့သည်။ ကျနော်ကလည်း မလျော့။ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း သေနတ်ဖြင့် ချိန်ထားသည့်ကြားမှပင် ကျနော်က စက်ရဲ့ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပြီး သူ (ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း) ကိုမလေးစားလို့မဟုတ်ကြောင်းကိုသာ တွင်တွင်ပြောနေတော့သည်။ နိုင်ငံရေးမှူး ကိုဌေးအောင်က ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေတော့မှ ထိုကိစ္စပြီးသွားသည်။ ကျနော့်ကို ချိန်ထားသည့် သေနတ်ကို ချလိုက်သည်။ ပြီး … အလိုလိုက်လို့ အမိုက်စော်ကားတယ် ဆိုပြီး ကျနော့်ကို ဆွဲချက်တင်တော့သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်တခုလုံးတွင် ကျနော့်စိတ်ထဲ စွဲထင်နေသည်က ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းပြောလိုက်သည့် “အလိုလိုက်လို့ အမိုက်စော်ကားတယ်” ဆိုသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။
ယခုသတိထားမိသလောက် ကျနော့်အပေါ်ချစ်ကြသူတွေတော့ များကြသည်။ ထို ချစ်ကြသူများထဲတွင် ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း လည်း ပါသည်။ “ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီ” တွင်နေစဉ်က ပါတီ ဗဟိုကော်မတီထဲတွင် ကျနော့်အပေါ် အလေးအနက် ထားသည့်သူ ၂ ဦးရှိသည်။ ဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ရွှေအေးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း။ နိုင်ငံရေးမှူး ကိုဌေးအောင် ကတော့ နိုင်ငံရေး ရေကြော မြေကြောတူကြလို့ ထားတော့။ ပါတီဗဟိုတခုလုံးတွင် ကျနော့်ကို “အသေးလေး”ဆိုပြီး ချစ်စနိုးခေါ်သူတွေကလည်း ထို ၂ ဦး။ ယခုတော့ ကျနော့်ကို “အသေးလေး” ဟု ခေါ်ကြသူများလည်း ကျဆုံး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီ။ တခါတခါ အရေးအရာထားပြီး ကျနော့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအမြင်တွေကို တောင်းကြသူများကလည်း ထို ၂ ဦးပင်။ ကျနော့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကို လူရာသွင်းပေးသူများအဖြစ် ဥက္ကဌကြီး ဗိုလ်ရွှေအေးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကို ယခုတိုင် အမှတ်ထင်ထင်ရှိနေသည်။
ကျနော် “ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီ”မှ ထွက်လာတော့လည်း သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ ကျနော့်အပေါ်ထားသည့် သဘောထားများကို ကြားနေရသည်။ ကျနော် စာတွေကို သေချာရေးသည်က “ကယမ်းပြည်သစ်ပါတီ”မှ ထွက်လာသည့် ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းမှဖြစ်သည်။ “ဒေါင်းအိုးဝေ - စာစောင်” တွင် ရေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ် သူတို့ဆီကိုရောက်သည်။ ကျနော် နေထိုင်ရာအရပ်သို့ သူတို့ပါးလိုက်သည့် သတင်းစကားရောက်လာသည်။ “အသေးလေး ရေးတဲ့စာတွေဖတ်ရတယ်။ သဘောကျတယ်” ပါတီ၊ ဒေသနဲ့ ကယမ်းလူမျိုးထုတရပ်လုံးကို ဦးဆောင်မှုပေးနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ၂ ဦးဆီက ရလိုက်တဲ့ ဒီအမှာစကားဟာ ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) အတွက်ကတော့ တကယ့်အားပါပဲ။
“ပြည်ရန်အေး”စခန်းက အနောက်တိုင်းကျေးလက်အိမ်လေးလို့ ဆောက်ထားတဲ့ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူးရုံးလေး ကို လွမ်းပါတယ်။ အဲဒီရုံးလေးနားက ကွင်းပြင်မှာ ချိုင်းထောက်လေးထောက်ကာထောက်ကာနဲ့ စင်္ကြန်ရှောက်ရင်း ပါတီ၊ ဒေသနဲ့ လူထုအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို စဉ်းစားအဖြေရှာနေတတ်တဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကို လွမ်းပါတယ်။ ဒိစခန်းနားက ရဲဘော်တွေရဲ့ စုပေါင်းတောင်ယာကွင်းမှာ ဒီအချိန်ဆို ရဲဘော်တွေ ပေါင်းရှင်းနေကြရောပေါ့။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရပြောရမယ်ဆိုရင် ဥက္ကဌကြီးဗိုလ်ရွှေအေးက ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးက လာသူ ကယမ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းကတော့ တကယ့်ကို လူမျိုးစု လယ်သမားခေါင်းဆောင်ပါ။ အခုတော့ သူ ကွယ်လွန်ခဲ့ချေပြီ။ သူ့ဘ၀တသက်တာ သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များကို ပြန်ကြည့်လျင် တော်လှန်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး။
“ပြည်ရန်အေး”စေဖို့ “ပြည်ရန်အေး”စခန်းမှာ ရုံးဖွင့်ခဲ့သူ ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်း။ သူကွယ်လွန်သော်လည်း သူ့ဝိဥာဉ်က “ပြည်ရန်အေး” တွင် ရှိနေပေလိမ့်မည်။
Posted by ဖိုးညို at 11:13 AM No comments:
ဂျင်းဘောင်းဘီ - အပြာ
ကျနော့်ကို ဗမာမိဘများမှ ဗမာပြည်မှာ မွေးသည်။ ကျနော်သည် ဗမာပြည်သား ဖြစ်သည်။ ကျနော့်အသက် ၄၀ ထဲ ရောက်လာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယခုထိတိုင် ပုဆိုး ကောင်းကောင်း မ၀တ်တက်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကို ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘ၀နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တွက်ကြည့်တော့ ကျနော့်အသက် ၁၄ နှစ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးဆိုသည်က ကျနော့် အသွေး အသားထဲသို့ ဒုတ်ဒုတ်ထိ တိုးဝင်သွားသည်။ သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်က တဖြန်းဖြန်း။ တိုက်ပွဲလမ်းကို တိုးဝင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် အချိန်သိပ်မကြာ။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သော အခါ မဲနယ်တောင်တန်းပေါ်က သူပုန်ကျောင်းသား။
ကျနော်ဟာ ကလေးစစ်သားများလား။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရဲဘော်ကြီး ဗိုလ်ဆန်နီပြောသည့်စကားကို သတိရမိသည်။ “ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမိုလို့ တော်လှန်ရေးဆိုတာပေါ်လာတာ။ ဘယ်သူကမှ ကလေးစစ်သားမစုဆောင်းပေမယ့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာ ကလေးတွေလည်း “မဆလ” ကို အလိုမရှိခဲ့ တာပဲ။” ဖြစ်ပုံက ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့် ကျောင်းသွားနေတုန်း “မဆလ” က ကျနော့်ကို တောထဲမောင်းပို့ ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဆိုးအစမ်းဝတ်စမှာပင် တောခိုခဲ့ရသော သူပုန်ကျောင်းသား ကျနော်သည် တောထဲ ရောက်သည့်အခါ “ကျောင်းသားတပ်မတော်” ရဲ့ စစ်ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ရသည်။ ခုံခုံမင်မင်။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး။ သေနတ် - အီကွေ့မန့် - ခြုံစောင် - မိုးကာ - ကျောပိုးအိပ်စာကြည့်တိုက်။ ကျနော့်တွင် ၀တ်စရာ ပုဆိုးမရှိ။ ထိုသို့ဖြစ့် ဆယ်စုနှစ် တခု ထိတိုင်။
ပြီးနောက် …။ တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တာဝန်မှသည် ဗဟိုရုံးတာဝန်များကို ရွှေ့ပြောင်းထမ်းဆောင်ရသည်။ ပြန်ကြားရေး - စည်းရုံးရေး - သုတေသန။ ပုဆိုးအစမ်းဝတ်ခါစမှာ တောခိုလာပြီး တိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်အဖြစ် တောထဲတွင် နှစ်အတော်ကြာ နေထိုင်လာခဲ့သည့် ကျနော့်အနေဖြင့် ဗဟိုရုံးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သည့်အချိန်တွင်လည်း ပုဆိုး မ၀တ်ဖြစ်။ ပုဆိုး မ၀တ်တက်တော့။ စစ် ယူနီဖောင်း ဘောင်ဘီမှသည် အရပ်ဝတ်ဘောင်းဘီသို့ ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ အရပ်ဝတ် ဘောင်းဘီကိုဝတ်ရသည့်အခါ ကျနော်အကြိုက်ဆုံးနှင့် ယနေ့ထိတိုင် ခုံခုံမင်မင် စွဲစွဲမြဲမြဲဝတ်သည့် ဘောင်းဘီက “ဂျင်း” ဘောင်းဘီ။ “ဂျင်း” ဘောင်းဘီကိုကျနော့်အကြိုက်ဆုံး။ အဲဒီ “ဂျင်း” ဘောင်းဘီမှာမှ အကြိုက်ဆုံးအရောင်က “အပြာ”။
“ဂျင်း” ဘောင်းဘီ ဆို၍ သတိရစရာတခု ရှိသည်။ သုံ့ပန်း တပ်မတော်သားလေးတဦးနှင့် ကျနော်တို့ ကျောင်းသားရဲဘော် များ ကြားမှ “ဂျင်း” ဘောင်းဘီအကြောင်း။
ကျနော် “ကျောင်းသားတပ်မတော်” မှာ ရဲဘော်အဖြစ်တာဝန်ယူစဉ် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ရပြီး သမိုင်းကြောင်းနှင့် စပ်ဆက်နေသည့် စခန်းနေရာ ၂ နေရာရှိသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်များလောက်ဆီက ဖာပွန်မြို့နယ် သံလွင်မြစ်တနေရာရှိ “ဒါးဂွင်” ဆိုသည့်နေရာကို ကျနော်တို့ကျောင်းသားများက ဗဟိုဌာနချုပ်တည်ထောင်ပြီးနေခဲ့သည်။ ထိုနေရာကိုလည်း ”ဒါးဂွင်” မှသည် “ဒေါင်းဂွင်” ဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည်။ ထို “ဒေါင်းဂွင်” ဌာနချုပ်တွင် ကျနော့်ရဲ့မိခင်တပ်ရင်းဖြစ်သည့် အမှတ် ၆၀၁ တပ်ရင်းအတွက် တပ်တည်နေရာပေးထားသည့် နေရာရှိသည်။ ထိုပေးထားသည့် တပ်တည်နေရာသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဂျပန်တွင် စစ်ပညာသင်ပြီး ယိုးဒယားတွင် တပ်မတော်ဖွဲ့ကာ ဗမာပြည်ကိုဝင်ခဲ့စဉ်က စခန်းချခဲ့သည့် တောင်ကုန်းဖြစ်သည်။
နောက်တနေရာက “လေးဝါး” စခန်း။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို စုဆောင်းစဉ်က ဗကသ များအဖွဲ့ချုပ်မှ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များထဲတွင် ထိုအချိန်က (ဗကသ)များ အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည့် “ဗိုလ်ရန်နိုင်” လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်မိခင်တပ်ရင်း တပ်တည်နေရာသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စခန်းတည်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သလို “လေးဝါး စခန်း” သည်လည်း ထိုအချိန်က ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် (ဗကသ) များအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ရန်နိုင် စခန်းတည်၍ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို တိုက်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်သည်။
ထို “လေးဝါးစခန်း”ကို စတင်ဖွဲ့တည်ခဲ့သည့်သူက ယခု “ကျောင်းသားတပ်မတော်” တွင် “ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်” အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားသည့် “ဗိုလ်ခင်ကျော်” ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ခင်ကျော်သည် လေးဝါးစခန်းကို အလကားရခဲ့သည် မဟုတ်။ တိုက်ပွဲများဖြင့် လေးဝါးစခန်းကို ရယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ လေးဝါးစခန်းတွင် ကျောင်းသားတွေ တပ်စခန်း မချနိုင်ရေးအတွက် ရန်သူစစ်အုပ်စုမှ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုထိုးစစ်များကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီး လေးဝါးစခန်းကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လေးဝါးစခန်းကို တည်ထောင်ခါစ။ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေစဉ် တခုသောတိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်သားတဥိးကို လက်ရ ဖမ်းဆီးရမိသည်။ သူတို့ဘက်က ထိုးစစ်ဆင်၍ တိုက်ပွဲများဖြင့် အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း လက်ရ ဖမ်းမိသည့် သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားရဲဘော်ကို မသတ်။ အစောင့်အရှောက်များဖြင့် ထားသည်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် တွင် လက်ရဖမ်းမိသည့် သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားများကို သတ်ရန် ပေါ်လစီမရှိသော်လည်း အဆင့်ဆင့်သော တပ်မတော် သားများကြား မှားယွင်းသည့် ၀ါဒဖြန့်မှုများကြောင့် သုံပန်းတပ်မတော်သားလေးက ကြောက်နေသည်။ သူ့ကို သတ်လိမ့်မည်ဟုပင်ထင်နေသည်။ အစောင့်ရဲဘော်များမှ ထိုသုံ့ပန်းတပ်မတော်သားလေးကို သတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း မည်သို့ပင်ပြောသော်လည်း သူက သတ်လိမ့်မည်ဟုပင် ထင်နေသည်။ သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားလေးက တငိုငိုတရီရီ။ ထိုအခြေအနေကို အစောင့်ရဲဘော်များမှ တပ်မှူးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ခင်ကျော်ကို တင်ပြကြသည်။
ဗိုလ်ခင်ကျော်က သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားလေးကို ထိန်းသိမ်းထားရာသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရတော့သည်။ ဖြစ်ပုံက ဗိုလ်ခင်ကျော်က တိုက်ပွဲတခုတွင် ဒါဏ်ရာရ၍ မျက်လုံးတဖတ်ထုတ်ထားရသည့်လူ။ ဗမာစစ်စစ်။ အသားမဲမဲ ထောင်ထောင် မောင်းမောင်း။ သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားလေးက ဗိုလ်ခင်ကျော်ကိုတွေ့သည်နှင့် ငိုလေတော့၏။ သုံ့ပန်းတပ်မတော်သားလေး ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ရန်သွားသည့် ဗိုလ်ခင်ကျော်ခမျာ ဘာလုပ်ရမည်မသိ။ ထိုသို့ဖြစ်နေစဉ် သုံ့ပန်းလေး၏ အပြောစကားကြောင့် ကျနော်တို့ရဲဘော်များအားလုံးငြိမ်မိလျက်သား။
“ကျနော့်ကိုသတ်မယ်ဆိုလည်း သတ်ပါဗျာ။ မသတ်ခင်မှာတခုတော့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဘ၀မှာ တခါမှ “ဂျင်း” ဘောင်းဘီမ၀တ်ဖူးလုိ့ သတ်မယ်ဆိုလည်း “ဂျင်း” ဘောင်းဘီလေးတော့ ၀တ်ပါရစေ။”
ယခုအချိန်မှာ ထိုသုံ့ပန်းလေးက ICRC အစီအစဉ်ဖြင့် ဥရောပတနေရာမှာ အခြေချနေထိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ သူ ၀တ်ချင်နေသည့် “ဂျင်း” ဘောင်းဘီများကို ၀တ်၍ ပျော်ရွှင်နေပေလိမ့်မည်။
မကြာသေးသောကာလက သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှ သူ့၏မိန့်ခွန်းတခုတွင် တောတွင်းရဲဘော်များကို သေနတ်များအစား လက်ပ်တော့များ ကိုင်စေချင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။ ကောင်း၏။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်အတွေ့အကြုံ ဖြင့် သမ္မတကြီးကို အကြံတခုပေးချင်နေမိသည်။ သမ္မတကြီးအနေဖြင့် တောတွင်းရဲဘော်များအား သေနတ်များအစား လက်ပ်တော့များပေးလိုသည့်စေတနာကို ကြိုဆိုသော်လည်း အမှန်တကယ်အနေဖြင့် သမ္မတကြီးနှင့်အနီးဆုံး တပ်မတော်သား အယောက်စိတိုင်းကို “ဂျင်း” ဘောင်းဘီတထည်စိ ဝေငှပေးစေချင်သည်။ သမ္မတကြီးအနေဖြင့် တပ်မတော်သားများကို ပေးစေချင်သည့် “ဂျင်း” ဘောင်းဘီ၏ အရောင်က … …
၂၄ - ၆ - ၂၀၁၂
Posted by ဖိုးညို at 10:55 AM No comments: